Atụmatụ na usoro na kọmputa nche - Ikkaro
Mgbe ị na-ekwu maka nchekwa kọmputa, ndị na-agba ọsọ na-abata n'uche ozugbo, kpọchiri n'ụlọ ha, na-ede na koodu ma nweta teknụzụ "feats" na-enweghị atụ.
Site na ndabara onye ọ bụla na-akpakọrịta ya na hacking, mana ọ bụ ihe dị mkpa karịa kwa ụbọchị.
Taa, anyị niile na-eji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ, kọmputa, mbadamba, smartphones, fitbands, smartwatchaes, ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi, Smart TV, ndị na-agụ akwụkwọ na anyị nwere ike ịga n'ihu na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ jikọọ na netwọkụ. Anyị niile na-eji ọtụtụ ọrụ, ụlọ akụ, netwọkụ mmekọrịta na data nkeonwe anyị. Ọbụna ọtụtụ n'ime ụmụaka anyị ndị na-eji ọrụ ndị a agaghị eji ọrụ ndị a eme ihe ma anyị amaghị otu esi eji ha n'ụzọ ziri ezi, otu esi ahazi ha na otu esi enwe opekempe nchekwa mgbe ị na-eme nchọgharị ma ọ bụ na-eji gadget.
Ndi mmadu amaghi maka njide nne na nna, nnabata uzo abuo na otutu ihe ndi ozo kwesiri ka ha buru isi ma anyi kwesiri ima na ha di iji nyere anyi aka.
Site na ngalaba a, m ga-agba mbọ dị ka o kwere mee, ịkọwa ma nye aghụghọ nke m ji n'aka na ọ ga-aga nke ọma maka anyị niile.
Etu esi agagharị na ip nke obodo anyi choro na TOR
Mgbe ụfọdụ anyị chọrọ ịnyagharịa na-egosi na anyị nọ n'otu mba, ya bụ, zoo ezigbo IP anyị ma jiri ọzọ na mba anyị họọrọ.
Anyị nwere ike ime nke a maka ọtụtụ ebumnuche:
chọgharịa n’aha na-enweghị aha,
ọrụ ndị a na-enye naanị ma ọ bụrụ na ị si na mba ụfọdụ,
awade mgbe ị na-ego ọrụ,
lelee otu websaịtị nke nwere ihe ndị e kere eke si arụ ọrụ.
N'okwu m ọ bụ nhọrọ ikpeazụ. Mgbe emechara ọtụtụ plugins na weebụsaịtị WordPress, achọrọ m ịlele na ọ na-egosipụta data ahụ nke ọma na ndị ọrụ nke mba ọ bụla.
Chọpụta oge I chefuola paswọọdụ ma ihe nchọgharị gị na-echeta ya n'agbanyeghị na ọ na-ezo ya na ntụpọ ma ọ bụ akara mmuke na n’ikpeazụ ị na-akwụsị ịgbanwe ya. Ọfọn, enwere ọtụtụ ụzọ iji hụ okwuntughe a, amaara m abụọ, gaa na mmasị nke ihe nchọgharị anyị iji hụ ebe ọ na-echekwa paswọọdụ na nke abụọ bụ usoro anyị ga-akụzi dị nnọọ mfe ma dịkwa ike karịa n'ihi na ọ na-enye ohere ka anyị hụ okwuntughe echekwara na mpaghara, ya bụ, na agbanyeghị na anyị azọpụtaghị ha ma n'ezie, ọ bụghị na ihe nchọgharị anyị, anyị nwere ike ịhụ ha.
Nke a bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ọmụmaatụ ị na-arụ ọrụ dịka otu na mmadụ tinye API na ụdị, dịka na WordPress, n'ụzọ a ị nwere ike weghachite ya ngwa ngwa iji jiri ya mee ihe ọzọ.
M na-ahapụrụ gị video na-akụzi otú e si eme ya na n'okpuru m na-akọwa ụzọ abụọ na omenala format (inspector and browser password manager)